Uzwile kangaki inkulumo ethi "Uvuke ngonyawo olungalungile"? Siyaqiniseka ukuthi okuningi. Ngokujwayelekile bathi lokhu, uma konke kuhamba kahle ekuseni, njengoba ungathanda. Akuyona isiqalo esihle kakhulu sosuku, futhi ngenxa yalokho, ukugeleza kwengxenye esele yayo. Esikhathini samanje sokuphila, kunzima kakhulu ukugcina ukuthula kwengqondo, okuyinto edingekile ukuba ube nomuzwa omuhle - isimo esicindezelayo emsebenzini, bytovuha ekhaya, ukuthi konke kuyakhathaza. Kodwa, noma kunjalo, ungaphelelwa ithemba! Manje sizokutshela izindlela ezimbalwa kodwa eziwusizo zokuthuthukisa isimo sakho sengqondo kanye nobungqabavu.
Woke up - kusho isikhathi sokuvuka
Uma nje uvukile, ungasheshi ukulala futhi, ngakho-ke kuyoba nzima kakhulu ukuba uphume embhedeni. Ebuchosheni bethu, e-hypothalamus, kukhona isikhungo se-excretion somlamuleli we-orexin, okuphethwe isimo sokuvuka. Uma kukhona i-orexin eyanele emzimbeni, sivuka. Konke okwenzeka ngemuva kwalokho - imizamo yethu yokulala enye imizuzu embalwa - ayinalutho, ngoba izobe ilele, noma ikhona ithuba lokulala! Ama-physiologists abonise ukuthi abantu abakhuthele badinga amahora ambalwa ukuze babuyiselwe, kungakhathaliseki ukuthi kuzwakala kanjani ukuthi i-paradoxical. Ngakho-ke ungabi nobuvila phakathi nosuku!
Okulandelayo ukuzamazama, ukuzungeza indlu, ungakwazi ukukhuluma efonini. Hambisa! Ungakhohlwa ngezitshalo zasendlini, uthele, ukhulume: ungakhuluma mahhala "ezindlebeni" nezitshalo zisabela kuyo, zizokhula kangcono. Njengoba ubuke ubuhle obuluhlaza, imicabango ecindezelayo iyodlula yodwa.
Ngendlela, ungaqala ekuseni ngomculo owuthandayo! Ngaphansi kwalo, thola! Uma kungenesikhathi esanele, yenzeni uma ufika ekhaya. Sikukwazisa ukuba uhlanganise izingoma ezithokozayo zemvelo, kuneziqoqo ezikhethekile, imisindo yezinyoni noma ezinye izilwane, kuye ngokuthi ufuna ukuphi.
Qinisekisa ukuthi ugeza ngemuva kokuphela kosuku. Ngakho ungahlanza konke okungalungile okutholiwe, nesimo sakho sengqondo ngesibonakaliso "-" uzohudula ukuya kwesibonakaliso "+". Ukuze uthole umphumela ongcono, sebenzisa amafutha ahlukahlukene aphunga elimnandi.
Enye indlela enhle yokuphakamisa i-vitality tone izoba igcwalise indlu nephunga elimnandi ngawe, ikakhulukazi njengoba kungelula ukuthola izinti noma amakhale, kunezitolo eziningi ezihlose i-aromatherapy. Ochwepheshe kule ndawo bacebisa ukukhetha ama-rose, i-jasmine, i-lavender noma i-geranium.
Futhi manje ake sikhulume ngezindlela zokuthuthukisa isimo sengqondo, ongasisebenzisa ngaphandle kwendlu, isibonelo, ehhovisi, esikhungweni noma eminye amakamelo agcwele.
Uma ufika ehhovisi, faka isithombe esihle kakhulu sedeskithophu yakho yekhompyutha. Esikhathini sokuqapha ungakwazi ukufaka isitika ngebuso obomomayo futhi ubuke ngezikhathi ezithile.
Uma unomuzwa wokuthi isimo sengqondo siwohloka, ukwandisa ithoni, udle ushokoledi omnyama omncane. Ngiyambonga, izinga le-serotonin emzimbeni wakho lizophuthuma, elenza kube lula ukwenza umsebenzi wezimoto futhi kuhileleke ekulawulweni kwethambo le-vascular (elitholakala ezinsukwini, ubhanana, ama-plums, amakhiwane, utamatisi, ubhontshisi). Futhi, ushokoledi unomthelela ekukhululweni kwe-anandamide - i-hormone enikeza isimo esimnandi sokuthokoza.
Indlela "eyodwa-amabili nantathu"
Uma lokhu kungakusizi ukuthi uthuthukise isimo sakho somoya, zama indlela "ye-One-two-three". Kulula ukuyisebenzisa, futhi akekho oyoqaphela ukuthi empeleni wenza. Ngezinye izikhathi - vusa ikhanda lakho, kabili - welula amahlombe akho, ukumamatheka amathathu! Ngokwenza kanjalo, cabanga ngento enhle, khumbula amafutha akho owathandayo, okwesikhashana, uye emadlelweni amakhulu ngezimbali ezinhle kakhulu. Ukuzwa okujabulisayo kunikeziwe!
Futhi ekugcineni, ushintshe kwezinye izinto. Le ndlela iphumelela kakhulu. Ukusula ukuhlukanisa kukuvumela ukuba ungabonakali ezinkingeni. Ungalalela ozakwabo ngokubanika ukusekelwa kokuziphatha, futhi kuwe-khumbula ingqondo yakho.
Izimbangela zesimo esibi
Uma lezi zindlela zokwandisa ubungqabavu nemicabango engakusizi, ke ake sibheke isizathu esijulile, kunoma yikuphi, akunakwenzeka ukuthi isimo sengqondo esibi siphume njengaleyo.
Imodi yamandla engalungile
Ngenxa yokungabi nesikhathi samahhala, kukhona ukudla okulula okuqhubekayo emsebenzini, futhi kwasekuseni akukwazi ukukhunjulwa ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke, zonke "izikhali ezinzima" ziyadla. Ungadli ebusuku, uzolimaza isibalo hhayi nje kuphela. Phakathi namahora angu-7-10 okulala ukudla kuqhuma, futhi esiswini nangamathambo kunezinqubo ezihlukahlukene zokubola. Ngakho-ke, kudla okungenani amahora amabili ngaphambi kokulala.
Ukungabi ne-oxygen ekamelweni
Ungakhohlwa ukuvula igumbi lapho ulala khona. Umoya we-Stale awufakisi ukulala kahle kwezwi. Ikakhulukazi, ubusuku obukhulu be-oksijeni buba buthakathaka, ngenxa yalokho, izibhamu zingase zenzeke, akunakwenzeka ukuthi lokhu kuzosiza ukuvusa okumnandi.
Futhi, ungasebenzisi kabi emini, ikakhulukazi ngaphambi kokulala, uphuze ne-caffeine. Sinikeza ikhofi ukuthi ithathe indawo ye-chicory, kunconywa ukuleleka, njengoba inikeza ukulala okunempilo.
Izindlela zokuphefumula zemizwa emihle
Khumbula, isimo sengqondo esihle akusiyo nje isenzo esiphezulu esiphezulu emcimbini, ngokuyisisekelo isimo sengqondo esizinzile usuku lonke, ukuthakazelela abanye, ukujabula. Lo mzwelo udinga ukudalwa ngokwakho, ukwazi ukuwusekela bese uwudlulisela kwabanye. Ukugcina ukuzinza kokuqina, kunezinhlobo eziningi zokuphefumula.
Ukuzivocavoca "Induduzo yangaphakathi"
Lala phansi lapho uqala khona ngemuva, khetha izindawo ezilukhuni - mhlawumbe phansi, usakaze ingubo ukuze kungabikho ukuhlukumezeka kokuxhumana naye ngesikhumba. Manje welula izingalo zakho emzimbeni, gcina imilenze yakho iqondile, uxhume izithende, futhi amasokisi asakazeke kancane. Thatha umoya ophuthumayo ngekhala lakho - makube isikhathi eside futhi ubushelelezi, akukho ukunyakaza okungazelelwe. Ukuphefumula kubambe isikhathi eside ngangokunokwenzeka kuwe, kodwa qiniseka ukuthi akubizi umzamo omkhulu. Ngemuva kwalokho, phuma ngomusa nangomusa. Ukuzivocavoca ukuphinda ekuseni nakusihlwa izikhathi ezingu-12. Lo msebenzi uzokuvumela ukuba uphumule umzimba nomqondo wakho, uzokukhulula.
Ukuzivocavoca "Ukuzizwa okuhle"
Hlala phansi noma ulale phansi endaweni ekhululekile, ukuvala amehlo akho. Philisa kakhulu. Ake ucabange ngomzwelo omuhle, imizwa enhle kunazo zonke owazizwa ngalesosikhathi. Ngokuningiliziwe, khumbula wena - izingubo zakho, izungeze, imibala, imibala, ama-aroma nemisindo. Zama ukukhiqiza lezi zithombe ngokugqamile ngangokunokwenzeka. Ngalesi sikhathi, unganciphisi ijubane nokujula kokuphefumula. Uma lesi sithombe sithola ukucaca phambi kweso lakho elingaphakathi, ingqondo iqala ukuthumela amajetshi emoyeni okhulile kulo mfanekiso. Cabanga ukuthi uphefumulela ngalesi sithombe, uyagcwalisa ngomoya futhi, nayo, ngamandla. Manje finyelela umphumela ohlukile, uphefumule amandla avuselelwe kusukela esithombeni ube ngokwakho. 10-12 Ukuphindaphinda okunjalo kuzokusiza ukubuyisela isimo esimnandi owaphupha kuso. Ukuzizwa kwakho kuzokuthuthuka ngokuphawulekayo, futhi kungekudala uzobona ukuthi uyamomotheka!
Konke okudingeka ukwazi ngephupho eliphelele
Izindlela zomphakathi zokwelashwa kwesithuthwane
Ukwelashwa kwemivimbo nezigaxa
Ukwelashwa kwamakhambi omuntu we-migraine
Ithonya lamahomoni esisindo somuntu
I-French Onion Pie
Ukwelashwa kwe-bruxism ezinganeni
I-Salmon enezinyosi nesinaphi
Izingane emshadweni: thatha noma ungathathi
Izifo ze-Hereditary, ukuxilongwa kwezifo
Ikhalenda Lunar ye-gardener-gardener ngoSepthemba 2015
Owesifazane ushayela imoto
Izimiso zokudla okunempilo kwezinyawo zakho